बिना लकडाउन कोभिड सँगसँगै गुजारा गरिरहेका पाँच देश « Naya Page
बिना लकडाउन कोभिड सँगसँगै गुजारा गरिरहेका पाँच देश
काठमाडौं, ३ असोज । कोरोना महामारी शुरु भएको १८ महिना बितिसक्दा, केही देशहरुले चाहिँ ‘कोभिड सँगसँगै बाँच्ने’ मोडल अपनाउन शुरु गरेका छन् । कतिले उच्च खोप दर पश्चात् यस्तो नीति अपनाएका हुन् भने कतिपय देशले चाहिँ लकडाउनका आर्थिक क्षति हेरेर बरु कोभिडसँगै बाँच्नु फाइदाजनक हुनेछ भनेर यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।
१. डेनमार्क : डेनिश सरकारले सेप्टेम्बर १० देखि नै कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण बन्देज र नियमहरु हटाएको छ । ‘कोभिड–१९ अब समाजलाई गम्भीर खतरामा पार्ने किसिमको रोग रहेन’ भन्ने ठहर गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । यहाँसम्मकी डेनिश नागरिकहरु कोभिड पासपोर्ट नदेखाइकन नाइट क्लब र रेस्टुरेन्टहरु पनि जान पाउँछन् । त्यस्तै सार्वजानिक यातायातमा चढ्दा मास्क लगाउनु पर्दैन भने ठूलो संख्यामा भेला हुन पनि दिइएको छ ।
तर यसमा डेनमार्कको सफलताका लागि यसको खोप दरलाई श्रेय दिइएको छ । सेप्टेम्बर १३ सम्ममा त्यहाँको ७४ प्रतिशत जनसंख्याले कोभिड विरुद्ध पूरा डोज खोप लगाइसकेको थियो । तर हाल राम्रो अवस्थामा भए पनि महामारी अन्त्य नभइसकेकाले फेरि समाज जोखिममा परे, सरकारले कडाइ अपनाउन नहिचकिचाउने स्वास्थ्य मन्त्री मेग्नस हेउनिकले बताएका हुन् ।
२. सिंगापुर : सिंगापुर सरकारले गत जुनमा मात्र कोभिड सँगसँगै गुजारा गर्ने रणनीतिबारे घोषणा गरेको हो । यसमा सिंगापुरले नयाँ संक्रमण नियन्त्रण गर्न नागरिकहरुको जीवन कठिन पार्नुको सट्टा खोप लगाउनमा जोड दिने र अस्पताल भर्ना हुने बिरामीलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने नीति लागू गरेको छ ।
‘नराम्रो खबर के हो भने कोभिड–१९ कहिलै नजान पनि सक्छ । तर खुसीको खबर हामी कोरोना सँगसँगै गुजारा गरेर पहिले जस्तै साधारण जीवन बिताउन सम्भव छ’, सिंगापुरका शीर्ष कोभिड–१९ अधिकारीले भनेका हुन् ।
निकायहरुले अगस्टदेखि नै विभिन्न कोभिड मापदण्डहरु हटाउँदै गएका छन् । पूरा डोज खोप लगाइसकेकाहरुलाई दुईदेखि पाँच जनाको समुहमा भेट गर्न दिइएको छ । तर अति संक्रमक डेल्टा भेरियेन्टका कारण केही समय अगाडि नयाँ बिरामी फेला पर्न थालेपछि यो नीति केही समय स्थगित गर्नुपरेको थियो । अघिल्लो हप्ता मात्र निकायले नयाँ संक्रमितहरु नियन्त्रण गर्न नसके पुनः कोभिडका मापदण्ड लागू गराउनु पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सिंगापुरको कोभिड टास्कफोर्सले अहिलेसम्म नयाँ संक्रमणलाई आक्रामक ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मार्फत नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिने बताएको छ । तर यस्ता उपायका वावजुद मंगलबार सिंगापुरमा बिरामीको दर एक वर्षकै उच्च पुगेको थियो । तरपनि खोप अभियान तिव्र भएकाले यसबाट गम्भीर बिरामी पर्नेको संख्या भने एकदम कम छ । यो भन्दा अगाडि सिंगापुरले ‘शून्य कोभिड नीति’ अपनाउँदै आएको थियो । त्यहाँका ८१ प्रतिशत नागरिकले पूरा डोज खोप लगाइसकेका छन् ।
३. थाइल्याण्ड : थाइल्याण्डले आगामी महिनादेखि नै राजधानी बैंककसहित अन्य सबै प्रख्यात गन्तव्यहरु खुला गर्ने बताएको छ । बढ्दो सङ्क्रमण संख्याका वावजुद पर्यटन उद्योगलाई पुनः जीवित पार्न भनेर यस्तो गर्न लागिएको हो ।
नयाँ कोभिड नीति अन्तर्गत कोरोनाको पूरा डोज खोप लगाएका पर्यटक र परीक्षणसम्बन्धी सबै मापदण्ड अपनाउने प्रतिबद्धता जनाउनेहरुलाई राजधानी, ह्वा हिन, पताया र चिआङ माइमा जस्ता ठाउँमा अनुमति दिइएको छ । फुकेट टापु चहिँ जुलाई १ देखि नै क्वारेन्टिनको आवश्यकता बिना खुला गरिएको थियो ।
२०२० मा संक्रमण दर न्युन राख्न सफल भए पनि यो वर्ष भने थाइल्याण्ड संघर्षरत् अवस्थामा छ । छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा थाइल्याण्डको खोप दर अत्यन्तै कम छ । थाइ जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशतले मात्र पूरा डोज र २१ प्रतिशतले कम्तीमा एउटा डोज लगाएका छन् ।
४. दक्षिण अफ्रिका : संक्रमण दर घटेसँगै दक्षिण अफ्रिकाले कोभिड–१९ का थुप्रै नियमहरु खुकुलो पार्न सुरु गरेको छ । जस्तै रात्री कफ्र्युलाई ११ बजेदेखि ४ बजेसम्मले घटाइएको छ । त्यस्तै भित्र बस्दा २५० सम्म र बाहिर ५०० मानिस सम्मलाई भेला हुन अनुमति दिइएको छ ।
महामारी अवधिभरि अत्यन्तै कडा नियम अपनाउँदै आएको देशले अचानक कोभिड मापदण्ड यसरी खुकुलो पार्नुलाई त्यहाँ ठूलो परिवर्तन मानिएको छ । त्यहाँ खोप लगाउनेको दर कम हुनुले पनि सो निर्णयलाई आश्चर्यजनक बनाएको हो ।
तर नियमहरु खुकुलो बनाइएपनि अधिक संक्रमक डेल्टा भेरियेन्टले तेस्रो लहर निम्त्याउन सक्ने हुँदा सचेत रहनुपर्ने राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले बताएका छन् । साथै उनले आफूहरुसँग देशभरका जनतालाई लगाउन पुग्ने खोप रहेको जानकारी पनि दिएका हुन् । उनले यस्तै गरी बाँकीका नियमहरु पनि हटाउन र सामान्य जीवनमा फर्कन सबैलाई खोप लगाउन प्रोत्साहन गरेका छन् ।
५. चिली : सफल र तीव्र खोप अभियानका लागि चिलीको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रशंसा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार त्यहाँका ८७ प्रतिशत योग्य नागरिकहरुले पूरा डोज खोप लगाइसकेका छन् ।
यति मात्र नभएर सरकारले कतिपयलाई अतिरिक्त बुस्टर डोज पनि दिन सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य निकायले बिहिबार मात्र चिनियाँ खोप साइनोभ्याकलाई ६ वर्ष भन्दा माथिका बालबालिकाका लागि स्वीकृत गरेको थियो ।
यसरी डेल्टा भेरियेन्टबाट जोखिम कायमै भए पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई बढावा दिन सिमा खुलाउने निर्णय सुनाएको हो ।
‘विदेशी पर्यटकहरु चिली आउन सक्नु भनेको हाम्रा लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । यो हाम्रो पहिलो उल्लेखनीय कदम रहेको छ र सहि स्वास्थ्य स्थिति कायम गर्न सक्यौं भने हामी यसरी नै अगाडि बढिरहने छौं’, पर्यटन सचिव होजे लुइसले भनेका हुन् । सीएनएन